लुम्बिनीमा चमक, खुद नाफा ७१.८०% ले बढाउँदा रिजर्भ र प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
काठमाडौं : लुम्बिनी विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को चौथो त्रैमासमा ५५ करोड ८३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७१.८०% ले नाफा बढाएको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३२ करोड ४४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफामा आकर्षक सुधार गरेकाले खुद मुनाफामा आकर्षक बढोत्तरी गर्न सकेको हो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा क्रमशः ४१.९७% र ६६.६८% ले वृद्धि भएको हो । यस्तै बैंकको वितरण योग्य नाफा पनि २८ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ ।
लुम्बिनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २० करोड ९७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको आज (साउन २८ गते) हुने सभाले १७.०७% बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गर्दैछ । बोनस वितरण पछि भने यसको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५८ करोड पुग्नेछ । लुम्बिनीको प्रतिसेयर आम्दानी २५ रुपैयाँ २२ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १७४ रुपैयाँ ०६ पैसा छ ।
लुम्बिनी विकास बैंकको वित्तीय विवरण यहाँबाट हेर्नुहोस् ।
साधना लघुवित्तले आइपीओ जारी गर्ने, लगत्तै ५०% हकप्रद पनि
ग्लोबल आइएमईमा १८ संस्थाको मिलन
कुलमानले पाए १ लाख राशिको ‘नाष्ट प्रविधि पुरस्कार’
मुस्ताङका किसानले स्याउ बेचेर ६० करोड कमाए, ६५ हजार मेट्रिक टन निकासी
सेयर तालिम नेपाली पैसामा आइतबार सुरु हुँदैछ, कतै लगानी गर्ने यो नै सबैभन्दा उपयुक्त समय त होइन ?
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले बढाएर घोषणा गर्यो लाभांश